I-15 tricks (+3) ye-Samsung Galaxy S10 + yokucinezela amava | I-Androidsis
Ezi zi I-15 (+3) yeyona ndlela ingcono yokulungisa amava e-Samsung Galaxy S10 +, Enye yeefowuni ezilungileyo ezisungulwe ngophawu lwaseKorea okoko yaqala uhambo lwayo kwintengiso ye-smartphone.
Uthotho lwamaqhinga onokuthi uthathe iifoto ezingcono, lawula iselfowuni yakho ngezimbo zomzimba okanye wenze nje okungcono. Sicebisa ukuba ubukele ividiyo ukuze ulandele la maqhinga ngentloko.
1 Yongeza iphepha lodonga kwiscreen
2 Sebenzisa izimbo zomzimba ezikwisikrini
3 Faka ukuSebenza kwesandla esinye +
4 Cima isikrini ngesandla
5 Cofa kabini ukuvula isikrini
6 Ungazithatha njani iifoto ezingcono
7 Hambisa indawo yokubangela
8 Faka iGoogle gCam
9 Sebenzisa isitshixo se-bixby ukumilisela usetyenziso
10 Iindlela zeBixby
11 Lungiselela ukuvulwa ngeminwe
12 Khubaza iBixby Ekhaya
13 Sebenzisa ii -apps zesikrini esigcweleyo
14 Yandisa ividiyo yeYouTube kwisikrini esipheleleyo
15 Guqula imbonakalo yomhlaba / yemizobo ngokukhawuleza
16 Cwangcisa i-Galaxy S10 + Reboot
17 Yenza imo yasebusuku isebenze
Yongeza iphepha lodonga kwiscreen
Gracias kwi-app entsha ye-Chainfire singafikelela kwezo imingxunya yamaphephadonga emingxunya ekhutshiweyo luluntu lwe-Android uqobo kunye ne-Samsung uqobo. Ke unokusebenzisa "ukuguqula" loo mingxunya kwiscreen seemodeli ezahlukeneyo ze-S10e, S10 kunye ne-S10 +.
Hidey Hole (Amaphephancwadi e-Galaxy S10 uthotho)
Umthuthukisi: Umlilo we-Chain
Khangela ngesixhobo Ukusuka kwiqhosha eliphezulu ngasekunene phantsi kwe «Izixhobo».
Zonke ziya kubonakala zikhetha enye kwaye ziyenze ngokokukhanya, umahluko kunye nezinye iisetingi.
Sebenzisa izimbo zomzimba ezikwisikrini
Ukuphucula amava eGPS S10 yakho entsha sikucebisa ukuba Sebenzisa izimbo zomzimba ezikwisikrini ukugcina ii-3 ziluncedo kwaye endaweni yoko ujikeleze ibha yokuhamba:
Useto> Ukubonisa> Ibha yokuhamba.
Sisebenzisa izijekulo kwiscreen kwaye ukhethe ukuba sifuna isikhokelo ngohlobo lomgca othe tyaba Emazantsi escreen kwisimbo ngasinye.
Faka ukuSebenza kwesandla esinye +
Umsebenzi weSandla esinye + yinkqubo entsha ye-Samsung oko kusivumela setha iqela lezimbo kwaye uzenze ngokwezifiso kanye njengoko sifuna. Uhlelo lokusebenza lwasimahla lokuvula isikhethi ngasekhohlo kwaye ukhethe isenzo esivela kuthe tyaba ngasekhohlo okanye ngokudibanisa phezulu okanye ezantsi.
Khumbula ukuba ungaqwalasela kwakhona i-trigger efanelekileyo. Unoluhlu olukhulu lwezenzo kwaye phakathi kwabo sicebisa ukuba uye kwiapp yamva nje.
Umsebenzi weSandla esinye +
Cima isikrini ngesandla
NgeSandla esinye sokuSebenza + sinako cima ikhusi ukuze silibaleUkucofa kwiqhosha lamandla:
Sikhetha i bonakalise ezantsi ngokomzimba.
Sikhetha ukucima isikrini.
Kwaye ngoku, ngalo lonke ixesha sisenza loo nto, isikrini siyakucima.
Indlela entle yoku dibanisa lo mqondiso ngompompo ophindwe kabini ukuvula isikrini se-Samsung Galaxy S10.
Cofa kabini ukuvula isikrini
Njengoko sisitsho, kanye njengokuba beyilelile Ngomhla wakhe i-LG G2 ngokuchukumisa kabini kwiscreen, kwiGPS S10 yakho unayo ukhetho lokucofa kabini kwiscreen ukuyilayita.
Ngenxa yokuba iqhosha lamandla iphezulu kakhulu ecaleni, lo msebenzi ubalulekile. Unayo kwiiSetingi> kwiScreen ukuze uyenze isebenze.
Ungazithatha njani iifoto ezingcono
Ukuthatha iifoto ezingcono kwi-Samsung Galaxy S10 + kubalulekile Sebenzisa i-4: 3 okanye i-3: 4 imo apho ufumana ezona pixels zininzi. Ngamanye amagama, siya kuba neyona mifanekiso ibukhali.
Kuyacetyiswa ukuba uthathe iifoto kule ndlela emva koko usebenzise ezakho Inkqubo yokuhlela ukuya kwi-16: 9; Nanini na xa ufuna eyona nto ingcono kwikhamera. Iifoto ezikwi-16: 9 zilunge kakhulu, nangona sikho ngoku ilinde imo yasebusuku ekhutshwe kuhlaziyo luka-Epreli lweGPS S10 +.
Hambisa indawo yokubangela
Ukuba uthatha iifoto ngesandla esinye, kungcono kunokuba sondeza i-shutter kwaye intshukumo yompu iyindalo ngakumbi kwaye ayinyanzelwa.
Cinezela ixesha elide kwiqhosha lokuvala.
Yisa apho ufuna khona
Faka iGoogle gCam
Unga khuphela i-gCam kuGoogle ngezibuko le-iDan kwinguqulo yayo engu-3.5. Sincoma ukusetyenziswa kwayo kwiimeko eziphantsi zokukhanya, kuba iyakwazi ukunika ukucaca okukhulu kwaye inike ixabiso elikhulu kwi-dynamism yendawo.
Khuphela i-gCam kuGoogle: iDan 3.5
Sebenzisa isitshixo se-bixby ukumilisela usetyenziso
Kwi-UI enye ye-Samsung ivumela ukuba sisebenzise isitshixo seBixby ukumilisela usetyenziso okanye umyalelo wesenzo. Siza kuyisebenzisa ukumilisela i-gCam kwaye ke unale app kwiqhosha lesiko.
Makhe siye Useto nakwisiqokeleli (i icon yeglass en magnifying), sichwetheza «Bixby»
Sikhetha i-Bixby Key kwaye siya kuba nothotho lweenketho.
Silungiselela isitshixo seBixby ngomnxeba omnye ukuze ukhethe i-app ye-gCam ekhutshelwe ngaphambili.
Iindlela zeBixby zisivumela ukuba siqwalasele ifowuni ngamanye amaxesha athile njengoko unakho Yiba ubusuku, kusasa, xa siphangele okanye ngokulula xa sidibanisa ii-headphone kwi-Galaxy S10 +.
Ngale ndlela sinako ulibale ukwenza imowudi ethe cwaka, beka icebo lokucoca ukukhanyal kwaye wehlise ukukhanya kwesikrini.
Lungiselela ukuvulwa ngeminwe
Kuya kufuneka wenze izinto ezi-3 ukuphucula isantya kunye nokusetyenziswa kweminwe yokuvula:
Hlaziya ifowuni Useto> Uhlaziyo.
Yiya kwiVenkile yeGlasi kwaye uhlaziye zonke iiapps. Ngokukodwa i-AOD (ihlala iboniswa).
Nje ukuba looapp ihlaziywe, siyacima yonke iminwe ebhalisiweyo kwaye siyiskene kwakhona.
Ngoku uya kuba namava angcono xa kuthelekiswa nexesha lokuqala owalisebenzisayo
Khubaza iBixby Ekhaya
Ukuba siqwalasele isitshixo seBixby ukubeka usetyenziso lwekhamera zikaGoogle, sinako phuma endleleni iBixby Ekhaya Ivela kanye kwidesktop kwindawo yokugqibela ebekwe ngasekhohlo.
Sebenzisa ii -apps zesikrini esigcweleyo
Ngokungagqibekanga sinesikrini kunye umtya omnyama ubekwe kwicala lasekhohlo. Oko kukuthi, ukuba sivula umdlalo, ngokuqinisekileyo ayizelelanga ngokupheleleyo kwaye loo mngxunya kwiscreen. Singaqwalasela zonke ii -apps okanye ezinye:
Siya kuseto> Iscreen> iiapps kwiscreen esigcweleyo.
Sikhetha zonke iiapps okanye ezo sifuna ukuba nazo.
Yandisa ividiyo yeYouTube kwisikrini esipheleleyo
Ngokuzenzekelayo usetyenziso lweYouTube, xa sibona ividiyo kwisikrini esigcweleyo, ishiya umda umnyama, esithintela ukuba sivelise amava evidiyo apheleleyo kule app.
Singayandisa ividiyo kwiscreen esigcweleyo seYouTube ngokucofa okulula ngeminwe yomibini. Oku kuyakuvela kwiscreen esigcweleyo kunye nomngxunya kwiscreen esibonakalayo.
Guqula imbonakalo yomhlaba / yemizobo ngokukhawuleza
Ukutshintsha imowudi ukusuka kubume bembonakalo yomhlaba ukuya ekumeni kunye nokunye, ngaphandle kokwenza umsebenzi ukusuka kwipaneli yokufikelela ngokukhawuleza, sinokhetho olungcono. Yi iqhosha elivela xa sijikeleza isikrini xa sikwi-portrait okanye imowudi yokuma komhlaba, kwaye okoko nje sinokukhetha okuzenzekelayo kokujikeleza kungasebenzi.
Iqhosha elincinci liyavela kwikona ephezulu ngasekunene ekufuneka sikucinezele ukuqhelaniswa ukuba kwenzeke.
Cwangcisa i-Galaxy S10 + Reboot
Ukuqala kwakhona iselfowuni kube kanye emva kweentsuku ezi-3 okanye kanye ngeveki kubalulekile. Siya Iya isanda ebusweni beenkqubo ezintsonkothileyo ezinjengePC yethu, Ukuqala kwakhona kuya kuqala yonke into ukusuka ekuqaleni, ukuvumela inkqubo ukuba isebenze ngcono.
Siya kwimisebenzi ephambili> ukuqala kwakhona okuzenzekelayo.
Silungelelanisa usuku olunye ngeveki okanye ezimbini.
Sincoma ukwenza ukusetha kwakhona ebusuku xa silele.
Ngentsasa iselfowuni iya kuba ngathi akukho nto yenzekileyo, kodwa yaqala kwakhona.
Yenza imo yasebusuku isebenze
Eli qhinga alikho kwividiyo, kodwa yenye yezona zinto zibalulekileyo. Singayilungisa imowudi emnyama ukuze ihlale isebenza okanye iyenze ngamaxesha athile emini njengaxa ilanga litshona emva kwemini.
Ukuba nemowudi emnyama kwi-Galaxy S10 + kuthetha ukuba uUkulondolozwa kwebhetri enkulu ngescreen se-Super AMOLED ukuba iipikseli ezimnyama azisebenzi.
Siyathemba ukuba Onke la maqhinga eGPS S10 + akunceda ukuba uphucule amava akho amnandi esele inika le fowuni ye-Samsung. Khumbula ukuba unayo ividiyo ukuze ukwazi ukuzibona zonke zikwi-chaneli yevidiyo ye-Androidsis.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukukopela kwe-Android » [VIDEO] Amaqhinga ali-15 (+3) awona maqhinga mahle kwi-Samsung Galaxy S10 +
Uvavanyo lukaGoogle ngesimbo esitsha esithathwe kwiXiaomi